မြန်မာနိုင်ငံ လုပ်သားများကျွမ်းကျင်မှု "စံ"သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရေးအဖွဲ့၏ Competency ရေးဆွဲပြီးသော အလုပ်အကိုင်များတွင် ရက်ကန်း၊ သစ်၊ ဝါးထည်နှင့် ယွန်းအလုပ်အကိုင်များ ပါဝင် - Yangon Media Group
မန္တလေး၊ ဩဂုတ် ၄ – မြန်မာနိုင်ငံ လုပ်သားများကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရေးအဖွဲ့ (NSSA) ၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း Competency ရေးဆွဲပြီးသော အလုပ်အကိုင် ၅၁ မျိုးတွင် မန္တ လေးပတ်ဝန်းကျင်ဒေသရှိ နာမည် ကျော်ကြားသည့် ရက်ကန်းအလုပ် အကိုင်၊ သစ်နှင့်ဝါးထည်ပစ္စည်း ဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်နှင့်ယွန်းအ လုပ်အကိုင်များပါဝင်ကြောင်း အ လုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး နှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ က ပြောကြားကြောင်း သိရသည်။
ဩဂုတ် ၄ ရက် မွန်းလွဲပိုင်း က မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည် ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ကနောင်ခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့သည့် အထက်မြန်မာပြည် ရှိ NSSA ၏ စစ်ဆေးအကဲဖြတ် ရေးဌာနများ တွင် အလုပ်အကိုင်ရှစ်မျိုး၌ စစ် ဆေးအကဲဖြတ်အောင် မြင်ခဲ့သည့် အမျိုးသားကျွမ်းကျင် အဆင့်ရရှိ သူများအား အသိအမှတ်ပြုလက် မှတ်များပေးအပ်ပွဲတွင် ၄င်းက ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“မြန်မာနိုင်ငံလုပ်သားကျွမ်း ကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရေး အဖွဲ့ (NSSA) အနေနဲ့ အမျိုးသား ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်များကို အဆင့် လေးဆင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီး ကျွမ်း ကျင-်မှုအဆင့်(၁)နဲ့အဆင့်(၂)တို့ ကို စစ်ဆေးအကဲဖြတ်လျက်ရှိပါ တယ်။ ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်(၃)နဲ့ အဆင့်(၄)ကို ဆက်လက်စစ်ဆေး အကဲဖြတ်နိုင်ဖို့လည်း စီစဉ်ဆောင် ရွက်နေပါတယ်။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း Competency ရေးဆွဲပြီးတဲ့အလုပ်အကိုင် ၅၁ မျိုးရှိလာပါတယ်။ အဲဒီအလုပ်အ ကိုင်တွေထဲမှာ မန္တလေးတိုင်းဒေသ ကြီးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတွေမှာ နာမည်ကျော်ကြားတဲ့ရက်ကန်းအ လုပ်အကိုင်သုံးမျိုး၊ သစ်၊ ဝါးထည် ပစ္စည်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင် သုံးမျိုး၊ ယွန်းအလုပ်အကိုင်သုံး မျိုးတို့ပါဝင်လာပါတယ် ” ဟု ပြည် ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေက ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ NSSA အဖွဲ့အနေ ဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်တွင်ရှိသည့် ကြီး ကြပ်ရေးမှူးအဆင့်နှင့်ကြီးကြပ်ရေး မှူးအဆင့်အောက်ရှိ လုပ်သားများ ရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုကို စစ်ဆေးအကဲ ဖြတ်ရာမှာ တာဝန်ယူဆောင်ရွက် လျက်ရှိပြီး ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်(၄) ဆင့် ခွဲခြားသတ်မှတ်ကာ တစ်စိတ် တစ်ဒေသ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားကို ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်(၁)နှင့် ကျွမ်း ကျင-်လုပ်သားကို ကျွမ်းကျင်မှုအ ဆင့်(၂)အဖြစ် စစ်ဆေးအကဲဖြတ် ပေးလျက်ရှိသကဲ့သို့ ကျန်ရှိသည့် ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်(၃)နှင့်ကျွမ်း ကျင်မှုအဆင့်(၄)ကို ဆက်လက် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်နိုင်ရန် အလုပ် အကိုင်ဆိုင်ရာ “စံ”များရေးဆွဲခြင်း၊ စစ်ဆေးမှုပုံစံများစမ်းသပ်ခြင်းတို့ ကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
NSSA ဟာ လူ့စွမ်းအားအရင်းအ မြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအ တွက် မူဝါဒများချမှတ်ပြီးတော့ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား၊ အစိုးရ Public,Private,Partnership ပူးပေါင်း၍ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ အ နာဂတ်အလုပ်အကိုင် ပြောင်းလဲ မှုနှင့်အတူ နည်းပညာနှင့်အသက် မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ လေ့ကျင့် မှုများနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအ ကဲဖြတ်မှုတွေအတွက် မူဝါဒများ ချမှတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်” ဟု ၄င်းကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ သည်။
ယနေ့အခမ်းအနားတွင် အ လုပ်အကိုင်ရှစ်မျိုး၌ စစ်ဆေးအကဲ ဖြတ်အောင်မြင်ခဲ့သည့် အမျိုးသား ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်(၁)နှင့်အဆင့် (၂) ကျွမ်းကျင်လုပ်သား အမျိုးသား ၃၇၃ ဦးနှင့် အမျိုးသမီး ၃၁ ဦး စုစုပေါင်း ၄၀၄ ဦးကို အမျိုးသား အဆင့် ကျွမ်းကျင်လုပ်သား အသိ အမှတ်ပြုလက်မှတ်များပေးအပ်ခဲ့ ပြီး ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ် ရေးဌာနတစ်ခုနှင့် စစ်ဆေးရေးမှူး လေးဦးကို NSSA ၏ အသိအ မှတ်ပြုလက်မှတ်များပေးအပ်ခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
NSSA လုပ်ငန်းစတင်ခဲ့သည့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်ကစပြီး ကျွမ်းကျင်မှု အလိုက် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ပေးခဲ့ ရာ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လအထိမြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်း အလုပ်အကိုင် ၂၃ မျိုးမှ ဖြေဆိုသူ ၁၄၀၇၉ အမျိုးသားအဆင့်(၁)နှင့် အဆင့်(၂)အတွက် အမျိုးသား ၉၀၃၄ ဦး၊ အမျိုးသမီး ၃၄၈၇ ဦး စုစုပေါင်း ၁၂၅၂၁ ဦးကို အရည် အချင်းပြည့်မီ၍ စစ်ဆေးအကဲ ဖြတ်ပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာ့ပထမဆုံး 3D ရုပ်ရှင် "ကြီးမြတ်သောမြန်မာ" ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား မကြာမီရုံတင်မည်
ကြက်ဆူစိုက်ရန် တစ်ဧကငွေကျပ် ၁ဝဝ နှုန်းဖြင့် မြေဧက ၃ဝဝဝ ကျော်ကို နှစ် ၃ဝ စာချုပ်ဖြင့် ငှားရမ်??
အစိုးရနှင့် NCA-S EAO ခေါင်းဆောင်များ သီးသန့် အစည်းအဝေး ရလဒ်များကို ဗဟိုကော်မတီတွင် ပြန်လည်ဆွေး??